उताबाट आवाज आयो, ‘लिफ्ट दिने?’
उतैतिर फर्केर भनिदिएँ, ‘अँ दिने।’
अरे क्या बात! म एउटी ‘साइकलवाली’ ले सहिदगेट बस स्टपमा लस्कर उभिएर जिस्क्याइरहेका एक हुल केटाहरुलाई चुप लगाएँ।
‘साइकलवाली’ जिस्काएर उनीहरु क्षणभरका लागि भए पनि मलाई कमजोर बनाउन चाहन्थे।
भर्खर तरेका आफ्नै आँखा चम्किए। मन दंग परेर मलाई भन्यो, ‘यु आर बोल्ड!’
तीन वर्षअघि एक साँझ नेदरल्याण्ड्सको एम्सटरड्याममा साथीहरुसँग ‘रेड लाइट एरिया’ घुम्दै थिएँ। त्यहाँ संसारभरका यौन व्यवसायी सिसाले घेरिएका कोठाभित्र सजिएर बसेका हुन्छन्।
साँच्चिकै आँट गज्जबको कुरा थियो। मजाक नै सही, हिजाबमा पूरै ढाकिएकी ऊ पुरुष यौनकर्मीको ‘डिमान्ड’ गर्दै थिई।
‘यो छोट्टी यति लाम्मो बाट्मो कहरी एक्लै आई, भ्याई लागेन कसरी, ‘ सिमकोट एयरर्पोटमा भेटिएकी बदमा रोकायाले खस भाषामा भनेकी, ‘यति लामो बाटो कसरी आउन सकेकी यो केटी।’
‘हाम्मो यत्तो उमेर भैगो ऐलेसम्म काठमाण्डु गया नाई, छोरी मान्छ त एक्लै कसरी आई। हामी त हाम्मा लोग्नया सात मात वडापुडा जादाछौं। न त काँही जादुनँ।’
फेरि खस भाषामा भन्थिन्, ‘यो छोट्टी यत्तो मुटु गरया भैछ बनपाखामा एक्लै हडन्या।’
बदमा दिदीका श्रीमान दिउँसै रक्सीले फिटान। सिमकोट बजारको भट्टिमा ‘ऐना हेर्ने’ लत।
बदमा दिदी ‘श्रीमान कुटी पो हाल्छिन् रे!’ उनकी छिमेकी ल्वादनी रोकायाले भनेकी।
‘रक्सी खाईकन जोई कुड्न्याकन बेस्मारी कुड्न पर्ण्या हो,’ बदमा दिदीले थपिन्। अर्थ चाहिँ रक्सी खाएर श्रीमती कुट्नेलाई बेस्सरी कुट्नुपर्छ रे।
बदमा दिदी त कस्ती आँटिली, ‘जड्ँयाहा पोई’ कुट्ने।
झण्डै १८ वर्षअघि साउन पूर्णिमा मेलामा देउडा गाएरै अहिले ‘जाँड खाएर सताउने’ श्रीमान भेटाएकी थिइन् उनले। देउडा खेल्दा एक अर्कालाई सुटुक्क मनपराएर बिहे गर्ने चलन पनि रहेछ धेरैका लागि।
कस्तो बिडम्बना! सहरका पढेलेखेका केटी अझै पनि प्रेममा छु, कसैलाई प्रेम गर्छु भन्न धक मान्छन्। समाजले पनि प्रेम गरेकी छु भन्ने केटीलाई ‘बिग्रेकी केटी’ को ट्याग लगाइदिन्छन्।
ल्वादनीले मलाई प्वाक्क सोधिन्, ‘अब कहिले पोईला जान्या?’
मैले आँखा झिम्क्याउँदै भनेँ, ‘पहिला देउडा सिकाउनुस्। अनि जान्छु पोईला।’
दिनभर बदमा जस्तै महिलाका कुरा रेकर्ड गरेर साँझ अस्थायी घर बिजय होटल पुग्थेँ। होटलका मालिक बिजय दाइ मलाई फुरुक्क पार्न भनिरहन्थे,’बैनी तपाईंलाई त पाईलोट बस्ने भिआइपी रुम दिएको।’
हुन त, भिआइपी रुममा रातभर बडेमानका मुसा कुद्थे। म मुसुक्क हाँसेर ‘धन्यवाद दाइ’ भन्दिन्थेँ।
मलाई उनीहरुको पीर लाग्यो। भोलिपल्टै बिहान भान्छामा आलु काटिरहेकी सानीलाई सोधें, ‘आधारातसम्म जँड्याहाहरु बस्छन्। चुकुल नभएको कोठामा सुत्न डर लाग्दैन?’
सानीले आलु काटिरहेकी चक्कु उचालेर भनिन्, ‘हामो कोठा पोस्न खोज्ने तेस्तो जँड्याहालाई यो चाक्कु तेर्साएर कात्तिलाई भगायो भगायो।’
‘दिदी आस्ति न मईले अत्रो मुसाको भुँडी चिरेर आन्ध्रा निकाल्देको नि,’ ठूलीले थपिन्।
मैले देखेको उनको हाँसो, आँट र साहस सबै झुट जस्तो लाग्यो। गममायालाई फोन गरेर सोधेँ, त्यत्रो पीडाको पात्र हुनुहुँदो रहेछ, किन मलाई ढाँट्नुभएको?’
गममायाले कड्किँदै भनिन्, ‘पत्रकारले तपाईंलाई दुःख छ कि, भानेको भन्यै गार्यो। अनि मैले दिक्क लागेर हो भन्दियो।’
साँझ परेपछि छोरी घर नफर्केसम्म सुर्ता गर्ने मेरो ममी। भन्छिन्, ‘जमाना खराब छ, छिटो घर फर्कने गर।’
उसै पनि टोलमा ‘सबभन्दा ढिला घर फर्कने केटी’ भनेर नाम कमाएकी छु। त्यसैपनि फेसबुक र इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेका वाइनका फोटाका कारण मेरो सोसियल इमेज ‘खराब’ छ।
इनबक्समा धेरैले सोध्छन्, ‘वाइनका फोटा पोस्ट नगर्नू नि। अरुले जज गर्छन्।’
प्रकाशित मिति: आईतबार, फागुन २७, २०७४ ०६:१९:२२